ESI ESI TINYE MAP NKE NAVITEL NA ANDROID - A GAM AKPORO - 2019
Ịwụnye map na Navitel Navigator na gam akporo
Navitel GPS navigator bụ otu n'ime ihe kachasị elu ma mepụtara ngwa maka ịrụ ọrụ na igodo. Site na ya, ị nwere ike ịchọta ebe ị chọrọ ma ịntanetị site na Intanet na offline, mgbe ị wụnye ụfọdụ map.
Anyị na-etinye map na Navitel Navigator
Ọzọ, anyị na-atụle otú e si arụnye Navigael Navigator n'onwe ya ma buru map nke ụfọdụ obodo na obodo n'ime ya.
Nzọụkwụ 1: Wụnye ngwa ahụ
Tupu ịwụnye, jide n'aka na ekwentị nwere ma ọ dịkarịa ala 200 megabytes nke ebe nchekwa dị. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa njikọ dị n'okpuru ma pịa bọtịnụ ahụ. "Wụnye".
Download Navigata Navigator
Iji mepee Navigatel Navigator, kpatụ akara ngosi nke na-egosi na desktọọpụ nke ama gị. Kwenye arịrịọ maka ịnweta data dị iche iche nke ekwentị gị, mgbe nke ahụ gasịrị ngwa ahụ ga-adị njikere maka ojiji.
Nzọụkwụ 2: Download na ngwa
Ebe ọ bụ na e nweghị map nke mbụ na onye ọkwọ ụgbọ mmiri, mgbe mbụ ịmalite ngwa ahụ ga-enye gị ibudata ha na enweghị onwe gị site na listi awa.
Pịa na "Kaadị akwụmụgwọ"
Chọta na họrọ mba, obodo ma ọ bụ obodo iji gosipụta ọnọdụ gị n'ụzọ ziri ezi.
Ọzọ, windo ozi ga-emeghe, nke ị pịrị bọtịnụ ahụ. "Download". Mgbe nke ahụ gasịrị, nbudata ahụ ga-ebido ma nwụnye ga-agbaso, mgbe nke ahụ gasịrị, otu map na ọnọdụ gị ga-emeghe.
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ibugo mpaghara ma ọ bụ obodo ndị agbata obi na ndị dị adị, wee gaa "Nchịkọta Isi"site na ịpị bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ogwe atọ n'ime ime ala akuku nke ihuenyo ahụ.
Soro taabụ "My Navitel".
Ọ bụrụ na ị na-eji ngwa ikikere nke ikikere, wee pịa "Zụrụ kaadị"ọ bụrụ na ibudatara Navigator maka iji ya na oge 6-free, họrọ "Kaadị maka oge ikpe".
Ọzọ, a na-egosipụta ndepụta nke map ndị dị na ya. Iji budata ha, gaa n'ihu n'otu ụzọ ahụ dị ka mgbe mbụ ị malitere ngwa ahụ a kọwara na mmalite nke nzọụkwụ a.
Nzọụkwụ 3: Wụnye site na saịtị ahụ
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta njikọ Ịntanetị na ekwentị gị, mgbe ahụ, enwere ike ibudata map gị na PC gị site na ebe nrụọrụ weebụ Navitel, mgbe nke a gasịrị, ị ga-ebufe ha na ngwaọrụ gị.
Download Map maka Navitel Navigator
Iji mee nke a, pịa njikọ dị n'okpuru ebe a na-eduga na kaadị niile ahụ. Na peeji nke a, ị ga-edepụta ha na Navitel.
Họrọ otu ị chọrọ, pịa ya, n'oge a ka ibudata na kọmputa gị ga-amalite. Na njedebe, faịlụ NM7 ga-adị na nchekwa ahụ "Downloads".
Jikọọ smartphone na kọmputa nkeonwe na ọnọdụ USB flash drive. Gaa na ebe nchekwa dị n'ime, otu nchekwa ga-esote "NavitelContent", na n'ihu na "Maapụ".
Nyefee faịlụ a ebudatara na nchekwa a, wee kpochapụ ekwentị site na kọmputa wee gaa Navitel Navigator na ama gị.
Iji jide n'aka na ejirila ebubo ebuo map, gaa na taabụ "Kaadị maka oge ikpe" ma chọpụta na ndepụta ndị ahụ sitere na PC. Ọ bụrụ na enwere igodo binbanye aka nri nke aha ha, ọ pụtara na ha dị njikere ịga.
Nke a mezighara ntinye nke map na Navitel Navigator.
Ọ bụrụ na ị na-ejikarị onye ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ ọrụ ọrụ na-egosi nnweta ogo GPS dị elu, mgbe ahụ, Navitel Navigator bụ onye inyeaka kwesịrị ekwesị n'okwu a. Ma ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta ikikere site na kaadị niile dị mkpa, mgbe ahụ ị ga - emesị ka ọrụ nke ngwa ahụ ga - enwe obi ụtọ.